नेकपा नेता लेखराज भट्टले भारतको विरोधमा विद्यार्थी सडकमा आउनु गलत भने पछि ! « Swadesh Nepal
नेकपा नेता लेखराज भट्टले भारतको विरोधमा विद्यार्थी सडकमा आउनु गलत भने पछि !
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले कालापानी र लिपुलेकको ऐतिहासिक पक्षलाई अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
ईतिहासमा कहाँ कहाँ कमजोरी गरेको हो भन्ने कुराको समिक्षा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।बिहीबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भारत र चीनबीच यु द्ध हुँदा कालापानीमा भारतले सेना राख्दा नेपालले पनि आफ्नो सेना राख्न सक्नुपर्ने्थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
लामो समयदेखिको उक्त विवाद हल गर्नको लागि यसअघिका सरकारहरुले पहल नगरेको र आफूहरु सरकारमा हुँदापनि त्यो काम नगरेको उनले स्विकारे ।
कालापानीको सवालमा आफूहरुले खु कुरी लिएर गएर त रं ग पैदा गर्ने मात्रै काम गरेको उनले गुनासो पोखे ।
उनले भने, जनताको सेन्टिमेन्ट लिनको लागि मात्रै हामी कालापानी खु कु री लिएर गयौं । त्यो हाम्रो कमजोरी थियो । हामीले ऐतिहासिक पक्षको गहन गर्नुपर्दथ्यो । द्धिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्दथ्यो । हामीले देखावटी देशभक्ति काम गर्यौं ।
लिपुलेकबारे सन् २०१४ मा भारत र चीनबीच सम्झौता गरेर लिपुलेक भारत र चीनको सिमाना राखेको सुनाए ।आफूले ६ महिनाअघि नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा धारणा राखेको उनले सुनाए ।भट्टले भारतको वि रो ध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा आउनुपनि गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भारतसँग कुटनीतिक तवरले समस्याको हल गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।नेपाल सरकारले कालापानी र लिपुलेक भारतीय नक्शामा पारिएकोबारे निकालेको विज्ञप्ती झारा टार्ने खालकोमात्रे रहेको कुरा बाहिर बजारमा चर्चामा रहेको पनि उनले सुनाए ।
त्यस्तै, भारतले निकालेको विज्ञप्तीपनि स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ । नेपालमा यदि भारतविरोधी गतिविधि बढेको महशुस भए भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग कुटनीतिक च्यानलमार्फत कुरा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
लिपुलेक, कालापानी नेपालकै भूभाग हुन र यसको प्रमाण नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्शाहरु, ब्रिटिश पुस्ताकालय, कयौं नक्शाहरु, कञ्चनपुर मालपोत कार्यालयमा रहेको पनि उनले सुनाए ।
उनले भने,हाम्रो पक्ष दरोसँग उभिनुपर्यो । तयारीका साथ द्धिपक्षीय संयन्त्रसँग जानुभयो । समाधान यी यी हुन हाम्रा भनेर जानुपर्छ ।उनले महालकाली सन्धि, टनकपुर बाँध बाँध्न आफूहरुले आफ्नो पक्ष दरोसँग नराखेको गुनासो पोखे ।
उनले भने, हामीले कुटनीतिक पहल गर्न सकेनौं । नेपाल र भारतबीच रहेका सबैखाले समस्याहरुको समाधान खोज्नेगरि नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ईपिजी मोदीले बुझनुभएन । नेपालले त बुझ्यो नि ।उनले नेपाली पक्ष भारतसँग लम्पसार हुन जरुरी नभएको बताए ।
उनले भने,हामीले हाम्रो अध्ययन दरोसँग राख्नुपर्छ । मित्रराष्ट हो भने भारतसँग हिचकिचाउनुपर्ने कारण नै छैन् । यदि अहिलेको सरकारको नेतृत्वले राख्न नसकेको हो भने कमजोरी हो ।
ओलीले किन फोन गर्नसक्नुभएन ? भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले भने,प्रोसेसमा जाने कुरा हो । अहिले विभिन्न बहस भैरहेको छ, यसले प्रेरणा देला । परराष्ट मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्छ । कुटनीतिक पहल भएन् । लिपुलेकबारे चिनियाँ राष्टपतिलाई लिडरले भन्यौं भन्नुभएको छ ।
हामीले पुरै विश्वास गरेका छौं । तयार हुनुभएको छैन भने कमजोरी हो । नेतृत्व राष्टको पक्षमा उभिनुपर्छ । कमिकमजोरी होला, तर चुक्न दिनुहुँदैन् ।लिपुलेक र कालापानी हाम्रा हुन भनेर हामीले तथ्यांक दिनुपर्छ । प्रमाणहरु हामीसँग छन् । वार्तामा बस्नेले उच्च मनोवलसहित जानुपर्छ ।